Royal Mail dia mamoaka ireo hajia lalao Retro mahafinaritra | Famoronana an-tserasera
Royal Mail dia orinasa misahana ny paositra any UK izay nahatonga anay ho gaga rehefa nandefa ity andiana hajia ity izay mankalaza ny vanim-potoana volamena filalaovana ao amin'ny fireneny izy ireo.
Lalao toa ilay angano Soccer na Elite mahay mandanjalanja Izy ireo dia lasa lasa fanangonana tombo-kase mahafinaritra izay ho an'ny gamer rehetra eo anelanelan'ny 30 sy 40 taona dia mihoatra ny fifaliana.
Azonao atao ihany koa mahita ilay Populaly goavambe, ary namelana anao ho andriamanitra hifehy andiana mpanaraka, avy amin'i Peter Molyneux tenany, ny Micromachines na ny Lemmings mihitsy.
Fanangonana iray manontolo mba hitehaka ary inona orinasa toa ny Ocean Azon'izy ireo napetraka nandritra izany taona izany ny fototra voalohany ho an'ny indostrian'ny lalao ankehitriny. Ireo izay tsy nanam-bintana hanandrana ireo lalao ireo dia afaka manatona ireo marika ireo ary mijery horonan-tsary sasany amin'ireo voalaza ireo.
Mijanona amin'ireo andalana ireo izahay Soccer saro-pantarina na Populinaly tenanyLalao izay nahavita namorona karazana mitovy tamin'izy ireo ary toa lavitra be izao, na dia manana fahaizana bebe kokoa amin'ny haitao aza, ahafahantsika manatrika lohanteny vaovao amin'io kaliber io
Ireo fitomboka ireo dia ho amidy 21 janoary ary azonao atao ny manandrana mahazo iray avy amin'ity rohy ity. Mbola tsy feno ny tranokala, saingy efa afaka apetrakao amin'ny tianao indrindra izany amin'izay andro azonao anaovana iray.
Una hevitra tsara natomboka tamin'ny Royal Mail Ary tianay ny handehananao tahaka an'i Correos eto Espana amin'ny sarimihetsika Artic mahafinaritra, La abadía del Crimen na ireo Didy lehibe. Tsy ho ratsy velively izany ary azo antoka fa ho fahombiazana ho an'ireo tsy nostalgia ho an'ny lalao taloha tamin'ny taloha. Avelanay miaraka amin'ireto ianao Tombo-pahatsiarovana an'i Agatha Christie.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Stamp ho an'ny nostalgia amin'ny lalao retro
Fitaovana marobe nampitomboina an'i Google hahitana sary 3D amin'ny karoka nataonao
Laptop na birao? Manampy anao izahay